Dowladda Canada Oo Ka Laabatay Musaafurinta Aabe Soomaaliyeed - Halbeeg News
Dowladda Canada Oo Ka Laabatay Musaafurinta Aabe Soomaaliyeed
Dowladda Canada ayaa dib uga laabatay in lasoo musaafuriyo Aabe Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yuusuf Maadey Maxamed, kaasi oo ku eedeysan in dalkaasi uu ku galay Baasaboor sharci darro ah.
Hay’adda socdaalka ee Canada ayaa Yuusuf oo macsalaameeyey ehelkiisa, kuna sugan garoonkii laga soo qaadi lahaa waxaa loo sheegay in dalkaasi uu sanad sii joogi karo kadib dedaal ay sameeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Canada.
Yuusuf ayaa warbaahinta u sheegay inuu aad u farxay markii uu maqlay go’aankan, wuxuuna sheegay inuu aad u ilmeeyay, maadaama laga joojiyey musaafurintii lagu keeni lahaa Kenya.
“Farxad weyn baan dareemay markii la igu yiri dalka Sanad waad sii joogi kartaa, runtii aad baan u ilmeeyay farxadda darteed, waxaana ku dedaali doonaan sidii aan ku caddeyn lahaa inaan ahay Soomaali sax ah, kaliyana haystay Baasaboorka Kenya” ayuu yiri Yuusuf Maadey.
Maadey oo ah Soomaali ayaa muddo 20 sano ah ku noolaa xeryaha qaxootiga IFO, wuxuuna sanadkii 2013-kii galay dalka Canada, isaga oo ku galay Baasaboor sharci darro ah, kuna soo baxay magaca Faarax Maxamed C/laahi.
Markii uu yuusuf Tagay Canada wuxuu guursaday Xaliima Ibraahim Cali oo ah Soomaali Canadian, waxay u dhashay Saddex carruur ah, iyaduna waxay horey u haysatay Hal gabar.
Isniintii shalay ayuu Yuusuf Maadey Maxamed ku qornaa diyaaraddii usoo qaadi lahayd dalka Kenya, balse dedaal la sameeyey kadib ayuu si lama filaan ah ku helay ogolaansho Sanad ah oo uu dalkaasi kusii joogo.
Dagaal Ciidamada Dowladda iyo Al-shabaab Ku Dhex Maray Duleedka Baardheere